Shirkadda Golis oo $50,000 ugu deeqday garoonka diyaaradaha Garoowe | Golis Telecom Somalia
Shirkadda Golis oo $50,000 ugu deeqday garoonka diyaaradaha Garoowe
Shirkada isgaarsiinta ee Golis ayaa maanta ku dhawaaqday inay dhaqaale gaaraya $50,000 dollar ugu deeqday koronto-galinta garoonka diyaaradaha Garowe oo wajigii kowaad dhamaaday. Lacagtaan oo $1000 dollar oo kamid ah iska soo aruuriyey shaqaalaha shirgada Golis ee ka howlgala Magaalada Garoowe.
Munaasabad ka dhacday magaalada Garowe ayay shirkadda Golis kusoo bandhigtay lacagtan ay ku wareejisay Guddiga dhismaha garoonka diyaaradaha Garoowe waxana kasoo qayb galay ,Wasiirka Duulista hawada iyo garoomada Puntland,Sanator Cabdiraxmaan Faroole,Islaan Ciise,Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Puntland,odayaal dhaqameed,Culimo iyo haween.
Lacagtaan ayay shirkada Golis ku wareejisay guddiga dhismaha garoonka oo uu hormuud u yahay madaxeynihii hore ee dowladda Puntland Cabdiraxman Faroole haatana ah xildhibaan katirsan gollaha aqalka sare ee Soomaaliya.
Shiikh Fu,aad Xaaji Nuur oo ka tirsan saraakiisha Golis ayaa sheegay in shirgada Golis ay marwalba u taagan tahay inay ka qayb-qaadato horumarinta dalka ayna lacagtaan ugu talo galeen garoonka diyaaradaha Garoowe.
Guddiga dhismaha Garoonka diyaaradaha Garoowe iyo Masuuliyiintii ka hadashay munaasabada ayaa si lama ilaawaan ah ugu mahad celiyeen shirkada Golis oo dhaqalahaan tirada badan ay ku caawisay dhismaha garoonka Garowe oo baahi weyn u qabay in loo helo dhaqaale bulshada ka yimaada.
Wasiirka wasaarada Duulista hawada iyo Garoomada Puntland, Xildhibaan Cabdiraxmaan Faroole iyo islaan Ciise Islaan Maxamed oo kamid ah gudiga dib u dhiska Garonka Diyaradaha ayaa Shirkada Golis uga mahad celiyey Deeqdan ay shirkadu ugu tala gashay Garoonka.
Gudoomiyaha guddiga dhismaha garoonka diyaaradaha Garoowe Cabdifitaax Maxamed Cabdi ayaa sheegay in dhaqaalahaan iyo qaar kaloo gacanta lagu hayo in lagu bixindoono sidii garoonka loogu xiri lahaa nalal casri ah oo garoonka ka saacidaya in diyaaraduhu habeen iyo maalin ay kasoo dagi karaan.
Shirgada isgaarsiinta Golis ayaa dhawaan sidookale $250,000 oo dollar ku wareejisay guddiga gurmadka abaaraha Puntland si loogu caawiyo dadka Soomaaliyeed ee ay abaaru saamaysay.